Marka Guurka Laguu Diido!-
By: Adam Abdi Abuzuhri Monday, December 03, 2012
MAQAAL:- Waad salaamantihiin walaalaha qeymaha badan ee kuxiran websitekan qaaliga ah. Maanta iyo maqaalkeena wuxuu kusaabsanyahay.. caado aad ufool xun Quursi oo ubaahan in la'iska kaashado cirib-tirkeeda.
Quursi? Waa qofka oo isku qanciyo inuu qofka kale kaga fiicanyahay isir,midib,diin, qaabka Allah usameeyey,lab iyo dhadig kuu yahay! Quursiga waa cudur da' weyn oo lakowsaday Aadamaha maalintii uu ifka yimid, wuxuuna kamidyahay cudurada faafa ee lakala dhaxlo!
Quursigu waa amardiidadii uhoraysay ee uu Ibliis ku kacay markii la'amray isaga malaa'ikta inay usajuudaan Nabi Aadam isagoo sabab kadhigtay inuu kaga fiicanyahay asalka iyo meesha uu kasoo jeedo, taas oo keentey inuu sidaas janada kuwaayo. Qofkii cudurkan laga helo, wuxuu halis uyahay inuu mustaqbalkii aakhiro kuwaayo aduunkana dhib kunoolaado!
"Quursigu qiil maleeyahay"
Sagaashamaadkii ayaan kaqeybgaley aaska hooyo Soomaaliyeed oo kugeeriyooday magaalada Nairobi ee wadanaka Kenya! Waxaa qabriga isku tuuray nin dheer oo sitay funaanad ay kuqorantahay "Quursigu qiil maleeyahay" si'uu iilka udhigo meydka! Waxaa la'igu sheegey inuu ahaa wiilkeeda oo ushaqeeya BBCda,laanta afka Soomaaliga. Inkasta oo aan hortaagneyn meyd iyo mowqif kuxasuusinaya Aakhiro, hadana hadalka funaanada kuqornaa wuxuu igu reebey xasuus!
Waxaa laga yaaba inaad iska cafiso qof kugu faquuqay qaabka Allah kuu sameeyey, sida isagoo kugu ceebiyo inaad jiistahay,ra'yigaadu qaldanyahay ama isu arko inuu kaafanyahay maadama uu lacag leeyahay laakinse aadan waxweyn kasoo qaadin oo aad halgan noolasha sii wado.
"Isma guursano? Isma gayno? Kuf umatihid gabadhanada! Dhanka Diinta? Midibka? Dhalashada? Malaha waxaa la'igu haystaa asalka ilaahay iga abuuray? Mmmm..Waa gaf diinta laga galay haddii taas la'igu haysto!! Mise talow aniga gacmahayga kugaystay waxaa aan fadarada kunoqotay?"
Waa su'aalo aan tafsiir laheyn! Waxaase hubaal ah qofka sidaas lagu sameeyey inuu ciil qabo, kana fikirayo sidii uu ku aar-goosanlahaa!Su'aasha waxay tahay 'tolow muxuu samaynkaraa?'
In badan ayaan isweydiyey 'dul-qaadka' walaalaha Soomaaliyeed ee mudada dheer latakoori jirey!
Xusuusin: cunsiriyada carabta ama soomaalida dhexdeeda iyo Diinta Islaamka yaan la'isku qaldin!
Sheekada ugu weyn ee maqaalkaan keentey waxay aheyd markii aan lakulmay oday Soomaaliyeed oo kacabana wiilkiisa oo guur loo diidey! Sheekadan oo dhowr waji leh, waxaa xusid mudan in odaygan kasoo jeedin dadka xooga lagu heeb-soocay, wuxuuna yiri isagoo kasheekeynaya wixii kudhacay: "Wiil aan dhalay oo dagan wadanka Norway iyo gobar Soomaaliyeed ayaa go'aan ku gaaray inay isguursadaan; waxayna kuheshiiyeen inuu nikaaxu kadhaco magaalada Doha maadama aniga iyo gabadha adeerkeed soo korsadey wada daganahay halkaan. Nasiib wanaag, gabadha adeerkeed waa raggii aan mudadada dheer wada joogney wadanka Qatar. Kulan iyo iswaraysi kadib waxaan kuheshiiney inuu nikaaxu dhaco isbuuc kadib.Waxaan farta kasaaray lacagtii howsha lagu qabanlahaa!
Sida dhaqanka Soomaalidu yahayba, waxaan gaarsiiyey odayaasha beesha aan kasoo jeeda ee ila tagilahaa gogasha aan gabadha kuweydiisanayno iyo anigoo sii diyaariyey sooryadii. Maalin kahor taariikhdii aan kuheshiiney, ayaa telephone la'ii soo direy ayadoo la'igu wargaliyey in gabadhii lagu mehriyey ina adeerkeed! Dabagal kadib, gabadha waxaa lagu yiri 'anaga iyo reerkaas' isma guursano ee ina adeerka ayaa kumudan!"
"Anigaba uma guuriyeeyn"
Odayga maadama uu nala wadaagay dareenkiisa iyo sida looga gardaranyahay,waxaan isku daynay inaan samirsiino anagoo xasuusinay in dad badan oo Soomaaliyeed sidaas lagu sameeyo hortiis ayadoo wax ay galabsadeen aysan jirin. "Maxkamad la'aan ayaa laxukumay inaan loo guurin, lagana guursan maadama ay yihiin gabooyo, midgaamo iyo magacyo fara badan oo aan lagaraneyn meesha laga soo guuriyey!"
Subxaanallaah, waa kanaa odaygkii oo isbadal! Walaahi magaranayo waxaa ku keeney isbadalkaas.Inta aamusay oo neefsada ayuu kujawaabay "Ilaahbaa nalahe, anigaba kuwaas uma guuriyeen gabar aan dhalay" Yaab iyo amakaak iyo cadaalad xumo intaas la'eg! qof diidan in isaga latakoorin laakinse dulminaya umadda kale! "Hadaa maxaad ugu xuntahay waxa wiilkaada kudhacay? Waxaad aaminsantahay ayaa lagugu ciqaabay!" Waa tanaa Fikradaha dadweynaha mar aan weydiyey sida ay u arkaan takoorida iyo inay ayaga laftooda kudhaqmaan caadadaas aadka ufool xun:
Faysal abusalman,Copenhagen, Denmark Walaal Aadam khayr Allaha kusiiyo aad baan ugu farxay markaan arkay mawduucan qaaliga ah runtii waa arin ubaahan inaan sihufan uga qayb qaato haduu eebuhu yiraahdo waayo anigay iqabsatay xanuunkeedana soo arkay.
Inkastoon qurbaha noloshayda ku qaatay somali kalama kulmin wax takoora lakiin dalkan aan deganahay waan kala kulamay oo waxaan la saftay nin madaw oon filayo inusan muslim ahayn; wuxuu ahaa ciyaartoy ;waxaana lagu colaadiyey midabka oo waxaa lagu yiri adoon(عبد) Aad baan ugu xumahay takoorka ku dhaca walalaha Soomaliyeed ee aan isku diinta iyo qabiilka nahay!
Waxaan ku talin lahaa in walaalaha laquursaday ee la qabatimay quursiga - lagu qanciyo in kan quursanayaa uusan waxba dheerayn ee uu la siman yahay.
Intaan markale kulmidoona waa walaalkiin Aadam Abdi Abuzuhri oo idinleh Assalaamu Alaykum. Wixii talo iyo tusaale ah abuzuhri1@gmail.com